Cyber Security – iNet College
HND Diploma (Cyber Security Pathway)
Empowering lives in professionalizing.
By the professionals; to the professionals
ယနေ့ခေတ်တွင် လူတိုင်း Phone, Tablet, Computer, Smtart TV အစရှိသည်တို့မှတဆင့် အင်တာနက်ကို အသုံးပြုပြီး တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး လျင်မြန်လွယ်ကူပြီး ကုန်ကျစရိတ်နည်းပါးစွာ ပြောဆိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
ထို့အတူ အင်တာနက်သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ကုန်ကျစရိတ်နည်းပါးပြီး (ကမ္ဘာနှင့်အဝန်း) ကြီးမားကျယ်ပြန့်မှုအရှိဆုံး စျေးကွက်အသစ်တစ်ခု အဖြစ်ဖော်ဆောင် လာပါသည်။
မိရိုးဖလာ လုပ်ငန်းတွေများသည်လည်း အင်တာနက်ပေါ်သို့ ရောက်ရှိလာကြပြီး ကမ္ဘာကြီးရဲ့ ပုံစံအသစ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအဖြစ်သို့ တဖြည်းဖြည်း ကူးပြောင်းလာလျက် ရှိပါသည်။
Online ပေါ်တွင် လုပ်ငန်းများ ပုံမှန်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားလည်ပါတ်နိုင်ရေး၊ Business and Financial Data များလုံခြုံရေး၊ မိမိနှင့် မိမိဖောက်သည်များ၏ သတင်းအချက်အလက်များ လုံခြုံရေး၊ ထွင်းဖောက်တိုက်ခိုက်မှုများကို ကာကွယ်နိုင်ရေး စသဖြင့် ဆုံးရှုံးမှုတစုံတရာ မဖြစ်ပေါ်စေရန် Cyber Security Engineer များ၏ အခန်းကဏ္ဍသည် အလွန် အရေးပါလာပါသည်။
Cyber Security Engineer အဖြစ် လုပ်ကိုင်ဖို့ရွေးချယ်သင့်သလဲ
အလုပ်လုပ်သည့် ပုံစံအမျိုးမျိုးရှိသည့်အနက် တချို့က ငြိမ်ငြိမ်လေးထိုင်ပြီး စဉ်းစားတွေးခေါ် အဖြေရှာနေရတာကို ကြိုက်နှစ်သက်ကြသည်။ တချို့က သွားလာလှုပ်ရှားပြီး လူအများနဲ့ ပြောဆိုဆက်ဆံနေရတာကို ကြိုက်နှစ်သက်ကြသည်။
Cyber Securityသည် ပညာရှင်အလုပ်ဖြစ်သောကြောင့် စဉ်းစားတွေးခေါ် အဖြေရှာပြီး လက်တွေ့ဖြေရှင်းရပါသည်။ ခက်ခဲမှု အသင့်အတင့်ရှိလိမ့်မည်။ သို့သော် Programming Coding ရေးသလောက် မခက်ခဲပါ။ မိမိလေ့လာထားတဲ့ Cyber Security ပညာကို အသုံးချပြီး အသက်မွေးမှုပြုရတဲ့ ပညာရှင်တစ်ဦးအဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
အလုပ်အကိုင် လမ်းကြောင်းအသစ် ဖြစ်သည့်အတွက် အလုပ်လိုအပ်ချက် မြင့်မားပြီး ပြည်တွင်း/ပြည်ပမှာ အလုပ်အကိုင်လည်းပေါပါသည်။
Cyber Security Diploma တန်းကို ဖွင့်လှစ်သင်ကြားရခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်
အရည်အချင်းရှိသော Cyber Security အင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးအဖြစ် ပြည်တွင်း/ပြည်ပမှာ လုပ်ကိုင်နိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ပြီး ဒီ Specialization Pathway ကို စတင်ဖွင့်လှစ်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
Cyber Security Diploma တန်းသို့ တက်ရောက်ရန် အရည်အချင်း လိုအပ်ချက်
အခြေခံပညာအထက်တန်း (သို့) GCE O Level အောင်မြင်ပြီး ဖြစ်ရမည်။
Pre-University Foundation တက်ရောက်ပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။
IELTS (4.5) နှင့် ညီမျှသော အင်္ဂလိပ်စာ အဆင့်ရှိရမည်။ (6.5 ရသည်အထိ ထပ်မံလေ့လာရန် လိုအပ်ပါသည်။)
Cyber Security Diploma ပြီးဆုံးလျှင်
UK တက္ကသိုလ်များ၏ ဒုတိယနှစ်အောင်မြင်ပြီးသည်နှင့် ညီမျှသော HND ဒီပလိုမာ ကိုရရှိပါမည်။
(၁)နှစ် ဆက်လက်တက်ရောက်ပြီး B.Sc.(Hons) ဘွဲ့ကို ရယူနိုင်ပါသည်။
နံနက် (၉:၀၀) နာရီမှ
ညနေ (၄:၀၀) နာရီအထိ
Unit 1: Programming 15
Unit 2: Networking 15
Unit 3: Professional Practice 15
Unit 11: Maths for Computing 15
Unit 7: Strategic Information Systems 15
Unit 4: Database Design & Development 15
Unit 5: Security 15
Unit 6: ManagingaSuccessful Computing Project 15
Unit 37: Architecture 15
Unit 49: Operating Systems 15
Unit 25: Information Security Management 15
Unit 24: Forensics 15
Unit 14: Business Intelligence 15
Unit 23: Cryptography 15
Unit 13: Computing Research Project 30
2000-2021 iNet College